အရင်လိုပါပဲ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 18, 2021 Author admin	Comments Off on အရင်လိုပါပဲ
တက္ကစီ တစ်စီး လမ်းဘေး သစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ရပ်ထားသည် ။ ကားပေါ်တွင်တော့ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာနှင့် နောက်ခန်းတွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားထားသော အမျိုးသား တစ်ဦး ။ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ခုနှစ်နာရီခွဲသာသာရှိသေးသည် ။ ကားဘက်မှန်ထဲ ကို ခနခန လှမ်းလှမ်းကြည့်နေမိသည် ။ မကြာပါ …. အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ခြင်းတောင်းလေးဆွဲလာသော ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြတ်လျောက်လာသည် ။ ဆရာမ က ကားတံခါးနားအရောက် ခြေအစုံ ရပ်တန့်သွားကာ ဘေးဘီသို့ တစ်ချက် ဝေ့၀ိုက်ကြည့်ပီး ကားတံခါးလေး ဖွင့်ကာ ၀င်လိုက်သည် ။ “မောင် ….စောင့်နေတာ ကြာပီလား “ “မကြာသေးပါဘူး အခုလေးတင်ပဲ ရောက်တာ ကျောင်းကို ခွင့်တိုင်လာခဲ့တယ်မလား “ “ဟုတ် တိုင်ခဲ့တယ် တခြားလူတွေ တစ်ခုခု ထင်မှာစိုးလို့ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပဲ ထွက်လာတာ “ “ကားဆရာ … …. လိပ်စာ ကိုမောင်းပေးပါ “ ကားလေး ဘီးစလိမ့်သွားသည် ။ ကားဆရာကတော့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နှင့် မောင်းနှင်နေလေသည် ။ ခြံဝင်းလေးနှင့် နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေး ရှေ့မှာ ကားရပ်သွားသည် ။ “ကျွန်နော် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ် ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန် လာခေါ်ပေးပါ“ လက်ထဲမှာ တစ်သောင်းတန် သုံးရွတ် ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ “အပြန်လာခေါ်ခပါ ယူသွားလိုက်ပါ ဆက်ဆက် လာခေါ်ပေးပါ “ “စိတ်ချပါဆရာ ဖုန်းသာဆက်လိုက် “ အိမ်လေးထဲသို့ နှစ်ယောက်သား ၀င်လာလိုက်သည် ။ အိမ်တခါးကို သေချာစွာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ကာ တက်လာခဲ့ကြလေသည် ။ အခန်းထဲ အရောက် အခန်းတံခါးကို သေချာစွာ ပိတ်လိုက်လေသည် ။ အိမ်ကြီးက တိတ်ဆိတ်နေသော်လည်း အခန်းတွေရဲ့ လုံခြုံလှသည် ။ အခန်းထဲမှာ သီချင်းသံ ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားလျှင်တောင် အပြင်က ကြားနိုင်မည်မထင် ။ အခန်း ထဲ စားပွဲပေါ်သို့ ဆွဲခြင်းတောင်းလေး တင်လိုက်ပီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားကြလေသည် ။
“ မျိုးမင်း ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပီး အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် ။ “အရင်လို နမ်းမပေးချင်ဘူးလား “ “အင်းးးး မောင့် စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရမယ်နော် “ မိုးသန္တာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည် ။ မျိုးမင်း လီးနဲ့ သူ့မျက်နှာက တစ်တန်းတည်း အနေ အထား ဖြစ်သွားသည် ။ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးလေး ကို အသာအယာ ကိုင်ပီး ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အောက်က လီးက ငေါက်ကနဲ ထွက်လာသည် ။ မျိုးမင်းလည်း အပေါ် အကျီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ မျိုးမင်း အ၀တ်အစားမဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည် ။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ကျောင်းဆရာမ ၀တ်စုံလေးနဲ့ မိုးက ဒူးထောက်ကာ မျိုးမင်းလီး ကို အသာကိုင်ပွတ်ပေးနေသည် ။ “မောင့်လီးက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုပဲနော် “ “အင်းးး စုပ်ပေးတော့ “ “အင်း “ လီးတံထိပ်ဖျားလေး ကို လျာနဲက အသာ တို့ထိလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းလေး ဟပီး ငုံပစ်လိုက်သည် “အားးးရှီး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ လီးစုပ်နေရင်း မိုးသန္တာ အရင်တုန်းက အချိန် တွေကို ပါ သတိရလိုက်မိသည် ။ တက္ကသိုလ် တက်တဲ့ အချိန်မှာ မောင်နဲ့ ရည်းစားတွေ ဖြစ်ပီး ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတာ အကြိမ်ကြိမ် ။ ထို့နောက် မောင်က နိုင်ငံခြားထွက်သွားသည် ။ သူလည်း ၀င်းနိုင်နဲ့ မိဘတွေ ပေးစားလို့ သဘောတူလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပီး ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်အဖြစ် ဘ၀ ကို ရပ်တည်လာခဲ့ကာ မျိုးမင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့လေသည် ။ အခု ပီးခဲ့တဲ့ သုံးပတ်ကျော်လောက်က မျိုးမင်းနဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်ဆုံကြတော့ နှစ်ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ကျနေသည့် အဖြစ် ဖြစ်နေသည် ။ သို့ပေမယ့်လည်း ငယ်စဉ်က အချစ်တွေ က တဖန်ပြန်မွေးဖွားလာသည်မို့ ဒီနေ့ အချိန် က သူတို့ နှစ်ဦးအတွက် ပထမဆုံး ပြန်လည်အချစ်နယ်ကျွံကြခြင်းဖြစ်လေသည် ။ မျိုးမင်းက တောင်းဆိုလာခဲ့သည်မို့ တော်တော်ကြာစဉ်းစားခဲ့မိသေးသည် ။ သို့သော်လည်း အရင်က အချစ်တွေက လွန်ဆန်မရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ခံစားမှုတွေ ပြန်လိုချင်ခဲ့မိသဖြင့် လိုက်လျောရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
“အား….အင်း….အီး….“ “အမလေးးးး အားးးး မောင်ရေ အားးးး“ လက်ခလယ်ကို ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်ရင်း မွှေထိုးပေးကာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်သည် “အားးး မောင် အားးးးရှီးးးးးးးးးးးး“ မိုးသန္တာ ဒူးတွေ ပါ တဆက်ဆက် တုန်လာလေသည် “အီးးးအားးးးးးးး“ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားကို တံတွေး ပစ်ခနဲ ထွေးလိုက်တော့ တံတွေးတွေက ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ ဖင်ပေါက်ဝထိ စီးကျလာက ပိုမိုစိုစွတ်လာပီး လက်ခလယ် အသွင်းအထုတ်မြန်ဆန်လာသည်။ “အ အ အ အားးးးးး“ “အင့် အင့် အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးး မောင် လိုးတော့ အားးးရှီးးးး “ “အင်းးး မိုး ဒီတခါ ဖင် ချ မယ်နော် မိုးဖင်ကို မချရတာ ကြာလှပီ “ “အင်းးးး မောင့်သဘော မိုး တကိုယ်လုံး မောင့်သဘောပဲ ကြိုက်တာလုပ် အားးးး“ မိုးသန္တာ နောက်တည့်တည့် တွင်နေရာယူလိုက်ပီး ဒူးကို အသာကွေးလိုက်ကာ ဖင်ပေါက်ဝ တွင် လီးဒစ်ကို တေ့လိုက်သည် ။ ဒစ်ခေါင်း ကို မြုပ်ရုံ လက်ဖြင့် ထိန်းကာ အသာ ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ စိုစွတ်နေသည်မို့ ဒစ်ချောင်းက ပလွတ်ခနဲ့ တိုးဝင်သွားသည် “အ …. “ “ဖြေးဖြေးချင်း အကုန်ထည့်မယ်နော် “ “အင်းးးး အားးးး ဖြေးဖြေး မောင် “ “အင်းးးးးး….အင့် “ စီးတွဲတွဲ တစ်ရစ်ချင်း ထိုးဝင်သွားတဲ့ အရသာ ကို နှစ်ယောက်လုံး ခံစားနေမိသည် “အားးး ရရဲ့လား မိုး တအားကြပ်တယ်နော် “ “အင်း ရတယ်မောင် ထိုးထည့် အားးးးး“ “အင်းးး တော်တော် ၀င်နေပီ အဆုံးထိ ရောက်တော့မယ် “ “အင်းးးးအ အ အ “ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကြည့်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည် “အားးးးအဆုံးထိ ရောက်သွားပီ “ “အားးး မောင်ရယ် နာလည်းနာတယ် ကြပ်တယ် “ “အင်းးး အထုတ်အသွင်းလုပ်မယ်နော် “ “အင်းး ဖြေးဖြေး မောင် အားးး မောင်လိုးပီးကတည်းက အခုထိ ဖင်မခံဖြစ်ဘူး “ “အင်းးး ဟုတ်လား ယောင်္ကျားက ဖင် မချ ဘူးလားးး“ “ဟင်အင်းးး မချဘူး “ “အင်းးး မိုးကို မောင်နဲ့ မိုးယောင်္ကျား အပြင် အခြားသူ နဲ့ လိုးကြသေးလား “ “အာာာ မောင်ကလည်း မိုးက မောင်နဲ့ပဲနေဖြစ်ခဲ့တာလေ အခြားလူ နဲ့ မနေပါဘူး ယောင်္ကျားရပီးး ယောင်္ကျားနဲ့ပဲခံတာပေါ့လို့ ဟွန်းးးး“ အ၀င်အထွက် နဲနဲ ကြပ်နေသေးသည်မို့ ဖြေးဖြေးချင်း အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးရင်း နို့တွေကို ညှစ်ပေးနေမိသည် ။
“အင်းးးး အာ့ကြောင့် မိုး ဖင်က ကြပ်နေတာကိုးးး အားးးးး“ “အင်းးးး အားးး ဖြေးဖြေးမောင် ကွဲ သွားမှာ စိုးတယ် အားးးရှီးးးးး“ “အင်းးးးးရှီးးးးအားးးး“ “အားးး မောင် ပြန်ထုတ်ပီး အဖုတ်ထဲ ပြန်သွင်းပီး ချောအောင်လုပ်လိုက်ဦး ကြပ်နေတယ် အားးးး“ မျိုးမင်းလည်း လီးတံကို ဖင်ပေါက်ထဲက ပြန်ချွတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ လေးငါးချက်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ် လီးတံမှာ စောက်ရည်များ နဲ့ ချွဲကျိကျိ ဖြစ်လာတော့မှာ ဖင်ဝမှာ တေ့ပီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်တော့ စောစောက ထက်စာလျှင် ပို ချောမွတ်လာတယ် “အားးးး မောင် ကောင်းလာပီ အင်းးးးးအားးးးး“ “အားးးး မိုး ဖင်ကို လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ အားးးးးး ဖြေးဖြေး ဆောင့်တော့မယ်နော် “ “အင်းးး မောင် အားးးးးး လိုးးးအမလေးးးးးး“ ဖင် ခေါင်းထဲမှာ လီးတံ က တော်တော်လေး ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်လာသည် “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးးးး ရှီးးးးးးးးအားးးးး“ “ဘု ဘုဘု …ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးးး အမလေးးးးးးး မောင် အားးး ကောင်းလာပီ ဆောင့် အားးးးး“ “အင့် အင့် အင့် ရော့ အားးး ကောင်းလားမိုး ကြိုက်ရဲ့လားးး“ “အင်းးး အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ အားးးး “ မိုးသန္တာ ရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို ဆွဲကိုင်ပီး နောက်ကနေ ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေသည် “အားးးးးးကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကွာ အားးးးး“ “အားးးး မောင် … မိုး ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ဘူးအားးးးး ကုတင်ပေါ်သွားရအောင်ကွာ မရပ်နိုင်တော့ဘူး“ ဟုတ်ပါသည် မိုးသန္တာ ဒူးတွေ တဆက်ဆက် တုန်လာပီး ရပ်နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည် “အင်းးးး လာ မိုးးးးး “ ကုတင်ပေါ်သို့ ဆွဲခေါ်လာပီး မျိုးမင်း ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ မျိုးမင်းဘေးမှာ ဒူးလေး တုတ်ကာ ထိုင်လိုက်ပီး လီးတံကြီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးလိုက်သည် “မောင့်လီးကြီး က အရင်ထက် တော်တော် ကြီးလာတယ်နော် တုတ်လည်း တုတ်လာတယ် “ “မိုးရဲ့ အလှတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ လီးက ပိုတောင်လာပီး ပိုထွားလာတာလေ “ သူမ ဖင်ပေါက်ထဲမှ ထွက်လာပီး အရည်တွေ စိုရွှဲနေသော လီးတံ ကြီးကိုကြည့်ကာ စိတ်တွေ ပိုထလာရင်း လီးတံကြီးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ မိုးးးးးရယ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးရှိးးးးးး“ “မိုးးး တက်ဆောင့်ပေးကွာ “ “အင်းးးး“ ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ချွတ်လိုက်ကာ မျိုးမင်းပေါ် ကျောပေးပီး ခွလိုက်သည် ။ မိုးသန္တာ သူ့လက်ကို သူ တံတွေး စွတ်လိုက်ပီး ဖင်ဝမှာ သုတ်လိမ်းကာ လီး တံကို ကိုင်ပီး တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်သည် “ဘွတ် …..“ “အားးးးးးးးးးးး ရှီးးးးးးးးးးအားးးးး“ “အင့်အင့်အင့်အင့် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ ကျောပေးကာ ထိုင်ဆောင့်ပေးနေသည်မို့ မိုးသန္တာရဲ့ ဖင်အိုးကြီးရော လီး အ၀င်အထွက်ကော သေချာစွာ မြင်နေရလေသည် ။ “အားးးးအီးးးးအားးးး“ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အင့် အင့် အင့် “ “ဖြန်း ဖြန်းးးးးး“ “အားးးးးးးး ဆောင့်ကွာ အားးးးး“ “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးး တောင့်လိုက်တဲ့အိုးကွာ …. မိုး နဲ့သာ လက်ထပ်ဖြစ်ရင် မိုးကို ဖင်ရော အဖုတ်ရော နေ့တိုင်းလိုနေမိမှာပဲ အားးး“ “အင်းးးးး အင့် အင့် အားးးး ကောင်းတယ်မောင်ရယ် အားးးး“ “အင်းးးး ဆောင့်ကွာ အားးးး“ “စောက်ဖုတ်ထဲ ပြောင်းဦးမယ်မောင် အားးး မိုး ပီးချင်လာတယ် အားးးးး“ လီးတံကို လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲ သို့ ပြောင်းထည့်လိုက်ကာ စကောဝိုက်ပုံစံ ဖြင့် လှည့်ကာ ညှောင့်နေမိသည် ။ “အင့် အင့်အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အင်းးးးအားးးးးရှိးးးးး“ “အားးးးမောင်ရေ အားးးးး အမလေးးးးး“ “အားးး ဆောင့် မိုးးး မောင်လည်းပီးတော့မယ် အားးးးးး“ “အင့် ကွာ အင့် အင့်အင့် “ မျိုးမင်း ကိုယ်ကို မတ်လိုက်ကာ မိုးသန္တာကို တွန်းလိုက်ပီး လေးဘက်ကုန်း အနေ အထား ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည် ။ လီးတံကတော့ ကျွတ်မသွား “အင့် အင့် အင့် အင့် “ နောက်ကနေ ခါးကို ကိုင်ပီး အားကုန်ဆောင့်လိုးတော့သည် “အင့်အင့် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “အားးးးးမောင် အားးး ထိတယ် အားးးအမလေးးးး“ “အင့် အင့် အင့် ရော့ကွာ အင့် “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် “ “အားးးး ထွက်တော့မယ် မိုးးးးအားးးး အင့်အင့် အီးးးးး“ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပို မြန်လာပီးနောက် မျိုးမင်း ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ မိုးသန္တာ ဆောက်ဖုတ်ထဲသို လရေတွေ တဖျောဖျော ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည် “အ အ အ အ အ အားးးးးးးးထွက်ကုန်ပီ မိုးးးအားးးးး“ “အားးး မိုးလည်း ပီးပီ အားးးး ကောင်းတယ် အားးးးး“ နှစ်ယောက်သား ဘေးသို့ ခွေခွေလေး လဲကျသွားတော့သည် ။ အဖုတ်ထဲမှ လီးတံကလည်း ကျွတ်ထွက်သွားကာ အဖုတ်ထဲမှ လရေတွေ စီးကျလာလေသည် ……ပြီးပါပြီ။
ပြုံး၍ကြည့်နေသော မူမူ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုသူ၏လက်နှစ်ဖက်က ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိသည် ပြီးတော့မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုသူ့ဖက်သို့ဆွဲယူလိုက်ရာက မူမူ၏ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေး နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်သည်။သူ၏အနမ်းကို ကြေနပ်စွာဖြင့််ခံယူနေသော မူမူက သူမ၏မျက်နှာလေးကို မော့၍ပေးထားရုံသာမကကြည်နူးစွာဖြင့်ပင်သူမ၏မျက်လုံးလေးများကို မှေး၍ချထားပေးသေးသည်။ မူမူ၏ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို နမ်းပြီးလိုက်ကာမှကျော်စွာ၏ကိုယ်တွင်းမှသွေးသား များက လွုပ်လွုပ်ရွရွဖြစ်လာကြသည်။ကျော်စွာ၏လက်နှစ်ဖက်က မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေး ကိုကျောမှသိုင်း၍ဖက်လိုက်မိသည်။ပြီးသည်နှင့်မူမူ၏မျက်နှာလေးကိုတပ်မက်စွာ ကြည့်နေရင်းကပင် သူ၏မျက်နှာက ငုံ့၍ ဆင်းသွားပြီးလျှင်ထူထူလေးလုံးနေသော မူမူ၏နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဖိကပ်ကာစုပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။ရုတ်တရက်ခြောက်ခြားသွားရသော မူမူသည်ထိတ်လန့်တကြားပင်ကျော်စွာ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အယောင်ယောင် အမှားမှားဖြင့် ပြန်ဖက်လိုက်မိသည်။ ဒီမျှအထိဖြစ်လိမ့်မည်မထင်ခဲ့မိသော မူမူတစ်ယောက်ရင်ထဲတွင်တုန်လွုပ်၍သွားရသည် ကတော့ မှန်ပင်ဖြစ်သည်။နမ်းသည်၊ကျော်စွာသည် အတော်ပင်မက်မောသော ဇောအဟုန်တို့ဖြင့် အတင်းကို နမ်းနေသည်။ ဒီလိုဆိုပြန်တော့လဲမူမူ၏စိတ်တွေက တမျိုးပြောင်းကာကြေနပ်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရသည်။ ကျော်စွာသည်မူမူထက် အသက်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်မျှငယ်လေသည်။ကျော်စွာ၏ မိန်းမ ဖြူမာကကို မူမူထက်(၇)နှစ်မျှပင်ငယ်သည်။သူတို့လင်မယားကို ဘေးမှ အခန်းတွင်ငှား၍ထားခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးပင်ရှိချေပြီ။ ဒါကလဲ မူမူ၏ယောက်ျား […]